Thierry Henry Oo Kusoo Laabanaya Saaxadda Tababarenimada Ee Muddada Kooban Uu Ku Fashilmay Iyo Kooxda Uu Tegayo – Latest Sports News
Halyeygii hore ee Arsenal iyo xulka qaranka France ayaa dib ugu soo laabanaya shaqada tababarenimada saddex bilood kaddib markii laga caydhiyey Monaco oo afar bilood oo madax xanuun ah uu layliyey.
Henry ayaa la sheegay inuu qarka u saaran yahay inuu heshiis tababarenimo u saxeexdo kooxda New York Red Bulls ee ka dhisan waddanka Maraykanka, halkaas oo uu mar kale ka bilaabi doono xirfadda uu ku cusub yahay ee macallinimada.
Kooxdan ayaa la sheegay inay eryi doonto tababaraheeda waqtigan Chris Armas oo ciyaartii ugu horreysay xili ciyaareedkan horyaalka MLS oo Sabtidii furmay ay kooxda New England Revolution kaga adkaatay 1-0.
Oliver Mintzlaff oo u qaabilsan Red Bull ciyaaraha dunida ayaa la sheegay inuu usoo bandhigay Henry oo 41 jir ah inuu la wareego shaqada tababarenimo oo uu beddelo Chris Armas.
Henry ayaa bishii January laga caydhiyey Monaco kaddib markii shan guulood oo kaliya uu u horseeday muddo afar bilood ah oo uu tababare u ahaa, waxaana qaabkiisa tababareimo dhalleeceeyey laacibka Aleksandr Golovin oo ka tirsan ciyaartoyga Monaco.
“Marka aanay ciyaartoygu tababarka si fiican u qaadanaynin, wuu cadhoon jiray oo qaylin jiray in badan. Waxa laga yaabaa in aanay daruuri ahhayn. Ciyaartoy ahaan wuxuu ahaa laacib xooggan, ciyaaryahannada kaliya ee laga yaabo inay heerkiisii kusoo dhowaadaana waxay ahaayeen Ramadel Falcao iyo Cesc Fabregas. Wuxuu isku dayi karayay inuu garoonka soo galo oo uu na tuso sida tababarka loo qaadanayo. Haddii uu tababare kale ahaan lahaa, waxa laga yaabaa inuu na fasixi lahaa amaba nasoo ururin lahaa, laakiin isagu wuu cadhoon jiray, waxaanu usoo ordi jiray dhinaca garoonka oo uu bilaabi jiray inuu ciyaaro isagoo wax nagu tusaya.” Sidaas ayuu yidhi
“Isaga oo qaylinaya ayuu odhan jiray ‘isku day inaad kubadda iga qaaddo.’ Ciyaartoyga intooda badan way degganaayeen, waxaana suurtogal ah inay la yaabbanaayeen. Markaa waxaad sheegi kartaa in aanu si buuxda ugu digo-roganin tababare.” Ayuu ku daray laacibkaasi.
Si kastaba ha ahaatee, Thierry Henry ayaa 135 kulan u ciyaaray kooxda hadda doonaysa ee New York Red Bulls, waxaana uu u dhaliyey 52 gool.